Garoua: Dhallinyar da 'yar ayaa kufsaday nin la sheegay inuu khaniis yahay - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Garoua: Wiil dhalinyaro ah ayaa kufsaday gabar la sheegay inuu khaniis yahay
Qofka loo malaynayo inuu hadda ka fikirayo mustaqbalkiisa xabsiga weyn ee Garoua
Tani waa magaca Ibraahiim Mohamadou Kaou aka Bayi, sano 32, kuna nool degmada Folbere degmada Garoua. Sida laga soo xigtay wargeyska The Eye of the Sahel oo ka warbixinaya macluumaadka, shakhsiga waxaa lagu xiray amar maxkamadeed oo la xiro Bishan Nofembar 05 2019. Waxaa lagu eedeeyay inuu si xun u isticmaalay Zadack Zihad, oo ah da 'da' da '17 sano.
"Waxaan socodkayga sii waday ku dhawaad ​​saacadaha 19 bishan Oktoobar 31. Wuxuu fadhiyey wadada dhinaceeda u dhow guriga Rdpc. Waxaan gacanta ku haystay shandad biyo ah "Sahel". Waxay ahayd shandad madhan maxaa yeelay waan wada cabbay wixii ku jiray. Waxaan u socdey si aan isdejiyo maxaa yeelay maalintii oo dhan ayaan shaqeeyey. Iyo sida aan ugu noolahay gudaha suuqa, waxaan ku qasbanaaday inaan is dejiyo ka hor saacadaha 20 maxaa yeelay waqtigaas ka dib, waardiyayaashii habeenkii ha xidhaan albaabada gala suuqa cidna ma galaan oo qofna kama baxo. Waxaan xidhnaa suxuun. Wuu ii yeedhay oo wuu i waraystay. Wuxuu igu eedeeyay inaan doonayo inaan baabi'iyo. Isaga oo igu eedaynaya, ayuu ii keenay isaga oo igu dhaliyay su'aalo taxane ah. Waqti ku filan kama aanan dhigin Garoua. Waxaan uga tagay tuulada si cusub, markaa waxba kama ogi waxa dhabta ah ee magaalada. Sidii uu ogaa inaan ahay qof garacaya, wuxuu iga codsaday inaan u raaco qolkiisa si aan u qaato dhawr ulo oo sigaar ah oo loogu talagalay nin dufan leh oo aan ka fogayn isaga. Wuxuu ii sheegay in gurigiisu aanu ka fogeyn halkaas oo ay tahay inaan dib u baxo oo aan guriga aado. Markaa waan raacay. Mar qolkiisii ​​ayuu albaabka inaga soo xidhay. Wuxuu i siiyay lix ulood oo sigaar ah. Waxaan doonayay inaan ku laabto ninkii uu i tusay sigaarka uu i siiyay. Markii aan damcay inaan albaabka furo, dib ayuu u qabtay dusha sare ee silsiladdii aan xirtay oo wuxuu iga dalbaday inaan xidho xubnaha taranka. Markaa ayuu soo saaray guskiisii ​​oo gacanta ku qabtay si aan u xiro. Anigoo ka baqaya isaga, waxaan bilaabay inaan sameeyo wixii uu doonayay. Sidii aan u xilsaarey, guskiisu aad ayuu u kordhayay waana sidaa uu aniga igu jejebiyey oo guska ii geliyay dameerkeyga, ayuu yiri Zadack Zihad.
Kufsigaas ka dib, Zadack Zihad wuxuu ku adkaaday socod. Mar alla markii uu ku soo noqdo guriga reerka, ninka yari waxa uu u sheegayaa nasiibdarrada walaalihiis. Saacadda ugu horreysa maalinta ku xigta, kan dambe ayaa u geyn doona isbitaalka halkaas oo uu ku sameyn doono baaritaanno caafimaad oo ka marag kacaya in lagu xadgudbay iyo in futada uu leeyahay dhaawac. Shahaado caafimaad ayaa la sameeyay oo uu ashtako ka gudbin doono kufsi uu u qabo kuxigeenkiisa Mohamadou Kaou kaas oo xiri doona 31 October 2019 ka dibna ku hayn doona 1er November 2019. Waa la baadhay ka dibna loo gudbiyey saldhiga dhexe ee saldhigga booliska ee Garoua 05 isla bishaas. Dembiilaha waxaa loo wareejiyay xeer ilaaliyaha guud waxaana la dhigay amar maxkamadeed oo lagu xiro isla 05 November 2019.
Isha: isha Sahel
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.ocameroun.info/57347-garoua-un-adolescent-viole-par-un-presume-homosexuel.html
Hadafka Afrika, laba naagood ayaa uurka leh